समाजबादी पार्टीले टुंग्यायो उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवार, यी हुन् समाजबादीका उम्मेद्वारहरु – Sanghiya Online
१७ कात्तिक, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आउँदो मङ्सिर १४ गतेका लागि उपनिर्वाचनको तयारी थालेको छ । सो निर्वाचनमा ४२ वटा स्थानीय तह, ३ प्रदेशसभा र १ प्रतिनिधिसभाका विभिन्न पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ । समाजवादी पार्टीले उपनिर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य र दुई प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार टुँगो लगाएको छ । आज बसेकाे केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले उम्मेदवारहरूको टुंगो लगाएको हो । पार्टीले बाग्लुङ-२ (ख)मा अशोककुमार बिक र दाङ-३ (ख)मा डिल्लीबहादुर डाँगीलाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ ।
कास्की बाट पार्टी प्रदेश कमिटीले रामबहादुर नेपाली, किरण थापा र गुरुङको नाम सिफारिस भएको थियो । उपनिर्वाचनमा कास्की-२ मा धर्मराज गुरुङलाई उम्मेदवार बनाउन लागेको समाजवादीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिनु भएको छ । धर्मराज गुरुङ पेशाले भूपू ब्रिटिश गोर्खा तथा इन्जिनियर हुन ।
प्रतिनिधिसभातर्फ कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारीको स्थानमा निर्वाचन हुँदैछ । दलहरूले यो निर्वाचन क्षेत्रका लागि उम्मेदवार घोषणा गर्न थालिसकेका छन् । नेकपाले पूर्व स्वर्गीय मन्त्री रवीन्द्रकी पत्नी विद्या अधिकारी भट्टराईलाई अघि सारेको छ । २०७४ को मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा स्वर्गीय अधिकारीले २७ हजार २ सय ७ मत ल्याएका थिए । उनका प्रतिस्पर्धी काँग्रेसका देवराज चालिसेले १८ हजार ६ सय ६१ मत पाएका थिए । चालिसेको भन्दा अधिकारीले ८ हजार ५ सय ४६ मत बढी ल्याएका थिए । सो निर्वाचनमा कूल ४९ हजार ९ सय १४ मत खसेको थियो । कास्कीमा तेस्रो बनेको विवेकशील साझाले ८ सय ४३ मत पाएको थियो । नेकपा मालेले ५ सय ४९, सङ्घीय समाजवादी फोरमले ३ सय ४१, नयाँ शक्तिले २ सय ४१, स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्मल खत्रीले १ सय १९ मत ल्याएका थिए ।
निषेधाज्ञाको प्रभावकारिता नेपालीको आँट ! पहलो पटक संक्रमित भन्दा संक्रमण मुक्त बढि
राजपाका नेताहरु एकले अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्ने हुनाले तत्काल एकतागर्न सकिन्न- उपेन्द्र
माघ ७ गतेभित्र संघीय निर्वाचन हुन्छ, शंका नगरौ ः देउवा
भारतको डिजाइनमा समाजबादी र राजापाको एकता हुने, उपेन्द्रले नमाने अर्को शक्ति घोषणा हुदै